I-Lucky Day - Win Real Money APK inguqulo yakamuva ye-9 Ansoli - imidlalo yasekhasino yamahhala ye-android
Usuku LukaLucky luyi-100% yama-Free Sweepstakes App!
Usuku Lwamahloni lunikeza i-scratcher yamahhala, i-lotto, ne-raffle imidlalo ithuba lokuwina imali yangempela kanye nemivuzo. Ngamathuba wansuku zonke wokunqoba kuze kufike ku-$ 100,000 ngemali ngokushesha, uthole imivuzo, noma faka ama-raffles!
Usuku LukaLucky luyindlela yokuphila yamahhala kudivayisi yakho yeselula. Sishintsha impilo nsuku zonke ngokunikela ngamakhulu emidlalo ukuze abadlali bethu baqale futhi babe nethuba lokuwina imali yangempela ngaso leso sikhathi.
Dlala amakhadi akho we-lotto nama-scratch akho mahhala ukuze uthole ithuba lokuwina imali yangempela nemiklomelo. Ama-scratch amakhadi amasha ayatholakala nsuku zonke ukuze uthole ithuba lokuwina kufika ku-$ 10,000 kweso sikhathi. Ungakwazi futhi ukungena emincintiswaneni ye-sweepstakes, i-raffle giveaways, ne-lotto yansuku zonke.
Inhloso yethu ukunikeza wonke umuntu ithuba lokukhulula ukuba neLucky Day ngoba sikholelwa ukuthi akufanele ube engozini yokulahlekelwa ithuba lokuwina!
Usuku Lwamahloni lungu-100% mahhala ukulanda futhi udlale ngaphandle kokuthenga kwangaphakathi nohlelo noma idiphozi.
Izici zeLucky Day:
WIN IMALI EYENZEKA
✔ Gcina umklomelo we-jackpot we-$ 100,000 ngokufaka i-lotto yansuku zonke!
✔ Win up to $ 10,000 ngokufanisa 3 izimpawu zokuwina emakhadini ngokushesha ukunqoba amakhadi!
✔ thola amakhadi wesipho kusuka kumikhiqizo ephezulu kuhlanganise i-Amazon, i-Walmart, i-Dunkin Donuts, i-Target, njll.
✔ Faka ama-giveaways epholile ukuwina imiklomelo emihle!
Jabula ukudlala usuku lonke
✔ Faka i-lotto yansuku zonke bese ubonisa imiphumela ngo-7 pm PT ukuze uthole ithuba lokuwina!
✔ Amakhadi amasha omusha nsuku zonke ngo-12 ekuseni PT.
✔ Bonus uqale amakhadi nsuku zonke ngo-10 ekuseni PT no-6 pm PT.
✔ Dlala Usuku Lwamahloni ngemaminithi angu-5 ngosuku ukuze uvivinye inhlanhla yakho futhi uthole lucky.
Ngaphezu kwamaRandi ayizigidi ezingu-5 ngenkokhelo kanye nemiklomelo iye yanikezwa abadlali beLucky Day, futhi sinabanqobi abasha abangu-30 000 njalo ngesonto! Usuku LukaLucky lukuletha ama-scratchers mahhala, i-lotto, nemidlalo ye-raffle ithuba lokuwina imali nemiklomelo. Ngezinkulungwane zabanqobile zangempela nsuku zonke, ungaba olandelayo!
Siyakuhalalisela kwabanye abawinile bamanje:
♥ uChristopher E. wase-Albuquerque, uNM owine uRaffle ka-$ 1,000 ngoDisemba 2018
U-Luis V. wase-Waterbury, CT owawuthola u-$ 1,250 Lucky Night Scratcher ngoJanuwari 2019
U-Jayda P. wase-Atlanta, GA ophumelele u-$ 400 Raffle ngoJanuwari 2019
Landa Usuku Oluhle futhi ubone ukuthi namuhla usuku lwakho lucky!
Kuzo zonke izindaba zakamuva namathuba okuwina okukhethekile, qiniseka ukuthi uthanda futhi ulandele usuku olumnandi kuma-social media!
Mayelana nezicelo zesici noma impendulo, sicela usithumele i-imeyili ku- [email protected]
I-Google Inc. ayixhasi, futhi ayikho indlela ehambisana noLucky Day kanye / noma imiklomelo ye-sweepstakes.
* I-Lucky Day iyinhlangano yokudlala yamahhala yeselula evumela ukuthi abasebenzisi bakwazi ukunqoba imali nemiklomelo, akukho ukuthenga kuyadingeka.
Inguqulo Yamanje: 6.2.2
Isilinganiso Esimaphakathi: (4.5 out of 5)
Abasebenzisi Bokulinganisa: 668,998
Izimfuneko: Android 4.4+
Isilinganiso Sokuqukethwe: Rated for 12+
Igama Lephakheji: com.luckyday.app